Kutya kutarisa kwevamwe
Iko kutya kwekutarisa kwevamwe, kutya kunodzoka kazhinji. Isu tese takararama nemumamiriro ezvinhu akaomarara! Iwe unoda here kutora nhanho muhupenyu hwako? Kana iwe unozvitaurira iwe pachena? Kana kungobvunza mubvunzo? Kunyangwe zviite zvidiki kana zvihombe zviito, kutya uku kunogona kuramba kuchidzoka kuzokumanikidza uye kusambokusiya ...
Dambudziko rinopararira zvakanaka uye rinozivikanwa pasi rese. Inogona kuva nemigumisiro yakaipa inokudzivirira kuti usafambire mberi, iyo dzimwe nguva inogona kukukomberedza: Ndezvipi zvakavanzika zvekurwa naro? Chii chinotora kukukunda uye kuramba uchive iwe?
Ndinokurumbidza neizvi 2 min video, iwe unonzwisisa kuti sei, pakuguma, inogona kuva nyore kukunda iyo uye kufambira mberi. Kutya kazhinji kacho kusikwa kwepfungwa dzedu, kunyengera, saka ita kuti kutya kwako kune vamwe kuone kuora mwoyo.
Zvidzidzo zviri nyore uye zviri nyore kuitika apo iwe unovaziva. Tora iyi nzira yekuita uye usunungure kutya kwako. Zvibvumira iwe mukana wekuve wakanyarara uye iwe pachako iwe pachako iwe pachako!
Muvhidhiyo ino uchawana mhinduro uye mazano anobatsira kudzivisa kutya kwemaziso evamwe uye kuita kuti hupenyu hwako huve nyore mazuva ose ..., uye zvose izvo, mune zvishoma 5 points:
1) Kubvuma Usapedza nguva uchifunga munzvimbo yevamwe vako.
2) Thevachibvumiranaé : "Nekuda kufadza munhu wese zvakanyanya, unopedzisira wafadza chero munhu" iwe unofanirwa kusarudza!
VERENGA Nzira yekuve yakangwara mumamiriro ezvinhu ose?
3) Mutsara : dai nyika yakakupoteredza, zvingave zvichiitika ...
4) kuwirirana : dzidza kuwirirana nekusazvidya mwoyo.
5) Kugamuchira : gamuchira miganhu yaro uye famba nenzira yako pachayo.
Rubatsiro runokosha ruchatibatsira muupenyu hwako hwezuva nezuva. Handisi kutya zvakare iwe?
Kutya Kwekutarisa Kwemwe-Ndezvipi Zvisiri Kukurwisa? April 22nd, 2018Tranquillus
pashureDzidza Zvimwe Zvichimbidzika uye Zviri nani Kuchengeta Musoro-Buda Pakupedzisira Kwekufa Kwebasa Rakaoma
zvinoteveraKubudirira pashure pekukundikana
Kurumidza kuwedzera mararamiro ako ekubudirira kusvika zviri nani kusvika pane zvinangwa zvako.
Tsvaga muganhu pakati pehupenyu hwehupenyu uye hwehutano